एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख सापकोटाको टकराव कहिलेसम्म ? यस्तो छ सम्वन्धको उतार चढाव ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख सापकोटाको टकराव कहिलेसम्म ? यस्तो छ सम्वन्धको उतार चढाव !
सभामुखको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह
नवौं महाधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूविरुद्ध एमालेको नाराबाजी सुनिसकेपछि सभामुख सापकोटा आक्रमक बनेका थिए
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार १५:०३:००
तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एक महिने लामो छलफल भएपछि अन्ततः ओलीले हार मान्दै प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका थिए – ‘ठिकै छ नि त, अग्नि सापकोटालाई नै सभामुख बनाऔं।’ सभामुखका लागि संसदीय मामिलाका जानकार र नरम भाषामा कुरो मिलाउन जान्ने खुबी भएका सुवास नेम्वाङ ओलीको रोजाइमा थिए। तर, प्रचण्डले नेकपाभित्र बहुमतको दबाब दिएर सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओलीलाई मनाए।
चाहँदै नचाहेको मान्छेलाई सभामुख बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपछि उनी नेकपाभित्र कमजोर बन्दै गएको टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भएको थियो। उक्त टिप्पणी त्यतिबेला भलै सत्य थिएन। तर, अहिले दुई वर्षपछि भने तिनै सभामुखका कारण ओलीको शक्ति कमजोर हुँदैछ । सभामुख र एमालेबीचको जुहारीले ससंद पनि पिल्सिँदै छ। सभामुखमाथि एमालेको अविश्वास र चालु ससंदमा सापकोटाविरुद्धको नाराबाजीले यो कुराको पुष्टि गर्छ।
प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन एमालेको अवरोधकाबीच तीन पटक चलिसकेको छ। एमालेले निष्काशन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर प्रतिपक्षीप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोपका नारा जप्दै ससंद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। जसले गर्दा ससंदमा राष्ट्रिय महत्वका विषय, थुप्रै विधेयकका बहस तथा छलफल हुन सकेका छैनन्।
पहिला जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई एमालेको कार्यकर्ताको संज्ञा दिइन्थ्यो।अहिले उसैगरी सभामुख सापकोटालाई पनि माओवादीको कार्यकर्ता भन्ने संज्ञा दिन थालिएको छ।
नवौं महाधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूविरुद्ध एमालेको नाराबाजी सुनिसकेपछि सभामुख सापकोटा आक्रमक बनेका थिए । जसपश्चात् उनको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउँदै पदीय मर्यादा र निष्पक्षतामाथि शंका गर्न थालिएको छ। जसमा उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन् ।
यसैको उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने बताइएको छ। तर, तीन ओटा बैठक अवरोधका बीच चलिसक्दा पनि सभामुखले व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुनै समिति गठन गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिपक्षले ससंद अवरुद्ध गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सापकोटाले एमालेसँग वार्ता गर्न पनि आवश्यक ठानेनन् । एमालेले सार्वजनिक रुपमै बारम्बार सभामुख आफूहरूसँग छलफल गर्न अग्रसर नदेखिएकाले ससंद अवरोध गर्नपरेको बताउँदै आएको छ। त्यसपछि बल्ल बैठकमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाए। तर, यसमा पनि एमालेले असहमति जनाएको छ।
एमालेले अवैधानिक मानेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी आउने भएपछि उनीहरू छलफलमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले र सभामुखबीचको टकरावमा जसपा, माओवादी केन्द्र, काँग्रेसलाई किन घुसाउनु पर्‍यो भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले सर्वदलीय बैठक बस्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।
एमालेको असन्तुष्टि कहाँनेर ?
गत साउन २ मै पार्टी विभाजन गर्ने सुईँको पाएपछि एमालेले १४ सासंदलाई कारवाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुर्‍याएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा पार्टीले कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र संसद् चलिरहेका बेला बैठकमा र नचलेका बेला सूचना पार्टीमा सूचना टाँसेपछि सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
सभामुखले जसपाले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दा २४ घण्टाभित्रै र माओवादीले चार जनालाई कारबाही गर्दा दुई दिनमै पदमुक्त गरेका थिए । अन्य पार्टीले आफ्ना सासंद कारवाही गर्दा सभामुखले केही दिनमै सूचना टाँसिदिने तर एमालेको हकमा भने १३ दिनसम्म पनि सूचना टाँस गरेका थिएनन् । यसैलाई लिएर एमालेले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
कारवाहीको सूचना टाँस्न एमालेका सासंदले बारम्बार सभामुखलाई भेटेर र फोन गरेर आग्रह गरेका थिए । तैपनि सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक पनि बहिष्कार गरेर विरोध जनाएका थिए। सांसद महेश बस्नेतले त सभामुखलाई बल प्रयोग गर्नु पर्न सक्ने धम्की दिएका थिए । तरपनि सभामुख मौन बसिदिँदा तिनै सासंदको सनाखतले पार्टी विभाजन भैछाड्यो । त्यसपश्चात् सभामुखलाई एमालेले दल विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
संविधानको धारा ८९ को ‘घ’ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सासंद पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको नियमावली २१२ मा यही प्रावधान बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिने भनिएको छ । अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डबाट हारेका केपी ओलीले अहिले १४ सासंदलाई कारवाही गर्दा भने छिटै थाक्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। संसदमा चिच्याएरै पनि सभामुखलाई आच्छुआच्छु पारेका छन्।
अब यो विवादबाट उम्किन कि एमालेले मुद्दा फिर्ता लिन पर्छ कि त सभामुख सापकोटाले कारवाहीको सूचना टाँस्नुपर्छ । तर, अहिले यी दुवै हुन सम्भव देखिएको छैन। एमाले १४ सासंदलाई पदमुक्त गरिछाड्ने पक्षमा छ । सभामुख पनि एमालेलाई पेलेरै ससंद अघि बढाउने सुरमा छन्। उनले एमालेका सासंदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधान सम्झाउँदै पन्छिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसदमा बहस गर्न बन्देज गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ख, ग र घ मा सभामुखले पद आचरणको छलफल नगरेको भन्ने विषयमाथिको छलफलबाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने र सभामुखमाथि कुनै पनि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुनेसमेत उल्लेख छ। यद्यपि एमालेले भने सभामुखविरूद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ ।